China ilayisi / ukolweni / okusanhlamvu Compound Acashile Machine-5XFZ-15XM ifektri abakhiqizi | UMaoheng
Ilayisi / Ukolweni / Okusanhlamvu Umshini Wokuhlanza Umshini-5XFZ-15XM
Isikrini somoya kabili:
Ngokulungisa ukusatshalaliswa kwevolumu yomoya yezikrini ezimbili eziqondile mpo, kusetshenziswa umgomo wokumiswa kwezinto, kuhlanganiswe nomsele wamandla omoya ombaxambili osusa ukungcola kokukhanya.
Futhi ukungcola okukhanyayo okufana ne-bauxite, uthuli, kanye nemikhumbi kususwe ngokuphelele.Ithebula lamandla adonsela phansi eliphindwe kabili / ithebula elilodwa lamandla adonsela phansi:
Ngokulungisa ivolumu yomoya nokuphakama kokuxakekeka kwesitolo setafula lamandla adonsela phansi, kusetshenziswa umthetho wokuphambuka kwezinto ezibonakalayo, ukususa imbewu ye-coriander, enesifo
imbewu, isikhutha, okusanhlamvu okungavuthiwe, nama-oats wezinhlamvu zikakolweni, isikwashi, njll.
Umshini wokuhlanza imbewu
ngesikrini somoya ophindwe kabili nethebula lamandla adonsela phansi.
Ngokulungisa ukusatshalaliswa kwevolumu yomoya yezikrini ezimbili eziqondile mpo, kusetshenziswa umgomo we
ukumiswa kwezinto zokusebenza, kuhlanganiswe nemigwaqo yomoya ehlangane kabili yokususa ukungcola kokukhanya.
Futhi ukungcola okukhanyayo okufana ne-bauxite, uthuli nemikhumbi kususwe ngokuphelele.
Ithebula lamandla adonsela phansi kabili / ithebula elilodwa lamandla adonsela phansi:
Ngokulungisa ivolumu yomoya nokuphakama kokuxakeka kwesitolo setafula lamandla adonsela phansi,
usebenzisa umgomo wokuphambuka kwezinto ezibonakalayo, ukususa imbewu ye-coriander, enesifo
Umshini onesakhiwo esihlangene, usebenza ngokushelela, umthamo omkhulu, ukusebenzelana kalula nokuhamba.
Umshini ungasetshenziselwa kabanzi ukucubungula imikhiqizo yezolimo kanye ne-sideline.
→ Ukubonisa okuningi kwe-engeli:
→ Imibuzo Evame Ukubuzwa:
Q: Ingabe imboni noma ukuhweba inkampani?
A:Singabakhiqizi abangochwepheshe bemishini yokuhlanza okusanhlamvu futhi sineminyaka engu-16 yokukhiqiza neyokuthengisa.
Q: Yini okudingeka uyazi ngokuxhumana okusheshayo nekhotheshini?
A: Kungabongwa kakhulu uma unganikeza imininingwane yama-specs wakho wokucubungula izinto, amandla nokusebenza kwesicelo, ukucaciswa kwesikrini, amandla kagesi wezimoto nomkhiqizo okhethekile odingekayo, nezinye izimo zokusebenza.
Q: Ingabe i-One Machines ingasebenza ezimbewini ezahlukahlukene?
IMP: Siphinde sisebenzise amasethingi aqondene nomuntu ngamunye, emshinini wethu ukukhawulela ukusikwa okungafuneki. Sinikeza izikrini zezinombolo okufanele zifakwe emishini eyodwa emsebenzini wethu ezinhlotsheni ezahlukahlukene zembewu.
Q: Kuzoze kube nini imikhiqizo ithunyelwa kimi?
A: Cishe izinsuku eziyi-10 kuye kwezingu-40 olwandle, kuya ngokuthi ukuliphi izwe nohlobo lomshini nezingxenye ezitholakalayo.
A: T / T, L / C, Western Union, Imali yamukelwe.
Idiphozi engama-30% nge-oda lokuthenga, ibhalansi engu-70% ikhokhwe ngaphambi kokuthunyelwa.
Q: Iphi imboni yakho futhi ngingavakashela kanjani?
A: Ikheli lefektri: CN, Hebei, shijiazhuang, eNingizimu yeNanxicun Village, ETDZ:
Ukusuka esikhumulweni sezindiza sase-Guangzhou Baiyun ukuya esikhumulweni sezindiza saseShijiazhuang kudinga cishe amahora amathathu bese ushayela kufektri yami (1hour)
Ukusuka esiteshini sesitimela saseBeijing ukuya esiteshini sesitimela iShijiazhuang badinga cishe amahora amabili, bese ushayela ufinyelela efektri (imizuzu engama-30)
Ukusuka esikhumulweni sezindiza saseHongkong kuya esikhumulweni sezindiza saseShijiazhuang kudinga cishe amahora ama-5, bese ushayela uye efektri (ihora eli-1).
Langaphambilini Elevator yebhakede (Uhlobo lokuphakamisa)
Olandelayo: Itafula elilodwa lamandla adonsela phansi lobhontshisi / ummbila / ukolweni
Okuzenzakalelayo Ummbila Ukupakisha Machine
Umshini Wokubamba I-Chestnut
Umshini Wobhontshisi Wekhofi
Coffee Ukupakisha Machine
Okusanhlamvu Ukupakisha Machine
Umshini Wokugcwalisa I-Granule
Umshini Wokugcwalisa I-Granule Powder
Ilayisi Thresher Machine
Imbewu Impahla Machine
Umshini Wokufaka Imbewu Yobhekilanga
Umshini wokumbesa ubhontshisi onohlelo lokumisa izinto (BYHG-8)
Ezolimo zisebenzise amandla adonsela phansi okususa imbewu kanye ...
Umshini we-Bean De-stoner (5XQS-1500M)
Inzalo yenyoni / umshini wokuhlukanisa imbewu encane ...
okusanhlamvu okuhlanzekile nembewu yokusanhlamvu ngeCorn Granulat ...
Umshini wokupholisa ubhontshisi wekhofi